Dr Sacda Mire oo noqotay Qofkii ugu horreeyey Qaaradda Afrika ee ku Guulaystay Abaal-marinta SAFA |
Londres (GNA)- Dr. Sada Mire, aqoonyahanad baratay cilmiga Aasaarta qadiimiga ayaa ku guuleystay abaalmarinta SAFA 2021, oo ay ku mutaysatay buug ay qortay ee #Divine_Fertility, isla markaana noqotay aqoonyahankii u horeeyey aan Yurub ahayn ee ku guulaysta abaal-marintan.
Dr Sada Mire waxay wax badan ka qabtay baahinta aasaarta iyo hiddaha geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, wuxuuna dhiirri-gelin u yahay jiilka cusub ee aqoonyahannada, gudaha Afrika iyo meelo kaleba. » Ayuu yidhi Professeur Insoll, oo taxliil ku sameeyey buugga.
War-bixintan waxa so turjumay Suxufi Mustafe Janaale, waxa lagu sheegay in Buugga Dr Mire uu si gaar ah u baadhayo saamaynta fikirka waddaniga ah ee nolosha maalinlaha ah ee Waqooyi Bari Afrika, Iyada oo la adeegsanayo cilmi baadhistii hore ee qadiimiga iyo qowmiyadaha, fikradaha, muuqaalka dhulka, agabyada iyo caadooyinka la rumeysan yahay inay la xidhiidhaan asaliga iyo dhaqanka la wadaago.
Daraasaddan qadiimiga ah ee dhulka muqaddaska ah, caadooyinka Masiixiyiintii hore iyo xarumihii muslimiinta qarniyadii dhexe ee Waqooyi -bari Afrika ayaa ah tii ugu horreysay ee so bandhigta qaab -dhismeed aragtiyeed iyo gorfayn ah oo lagu fasirayo dhaxalka gobolka ee la wadaago iyo taariikhda asaliga ah ee gobolka. Waxay qiimo weyn u yeelan doontaa khubarada qadiimiga ah, cilmiga dadka, taariikhyahannada iyo siyaasad -dejiyeyaasha daneeya Afrika iyo wixii ka dambeeya »
Aqoonyahanno kala duwan oo taxliil ku sameeyey buugga, ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. « Kani waa shaqo kalsooni leh, oo xirfad leh oo uu leeyahay qof si gaar ah u qalma si uu u fuliyo cilmibaarista khuseysa … buug cajiib ah oo cad, oo laga yaabo kaliya Sada Mire (oo ay weheliso aqoonteeda aragtiyeed ee dhowr farsamooyin tacliimeed iyo isu -dhowaansho maxalli ah) waa la gaadhi lahaa. Tani waa shaqo cilmiyeed, oo leh rafcaan guud oo aad u ballaaran », Sidaa waxa yidhi Neal Ascherson, oo ah qoraaga Buugga The King Incorporated horena u ahaa saxafi ka tirsan Wargeyska The Observer
« Sada Mire waxay ku kortay Geeska Afrika, Buuggeedu wuxuu bixinayaa fikrad geesinimo leh oo ku saabsan nidaamka gobolka oo ku saleysan falanqayn, isla markaana muujinayaa muhiimadda goobtu u leedahay ficil astaan, aqoon iyo xusuusta dhaqanka. Buuggu waa daraasad gaar ah oo ku saabsan xusuusta dhaqanka ee meesha taal, kulan hodan ah oo leh taariikhda qoto dheer ee ficil astaan, shucuur iyo saameyn bilicsanaanta. » Ayuu yidhi-Professeur Howard Morphy, Jaamacadda Qaranka Australie
Buugga Dr. Sada Mire wuxuu wax badan ka qabtay baahinta hiddaha qadiimiga ah iyo hidaha Geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, wuxuuna dhiirri -gelin u yahay jiil cusub oo aqoonyahanno ah, gudaha Afrika iyo meelo kaleba. » Ayuu yidhi Professeur Timothy Insoll, Dib -u -eegista Qadiimiga Afrika
« Shaqo -hawleedkan iyo ballanqaadkiisii hore ee gobol qadiimiga ah oo la dayacay ayaa durba Sada ka dhigaya inay noqoto hormuud », sidaasnawaxa yidhi Dr Stephanie Wynne-Jones oo ka tirsan Trowelblazers iyo Jaamacadda York.